ပါဝင္ရန္ WTE အောက်ဖော်ပြပါအကျိုးကျေးဇူး ၄၈ ခုကိုရယူပါ။
သငျသညျအခြို့သောပိုင်ဆိုင်မှုများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ (စက်ယန္တရား, ပစ္စည်းကိရိယာ, နည်းပညာ, တစ်ခုလုံးကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ, သတ္တုတွင်း, turn-key ကိုစက်ရုံ, စသည်တို့) ကိုဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်လက်ရှိစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံအဆင့်မြှင့်ချင်တယ်။ သို့သော်သင့်တွင်ပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်များသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းအသစ်များ ၀ ယ်ရန်သင့်တော်သောအရင်းအနှီးမရှိပါ။ ပြီးတော့သင်ဘဏ်တစ်ခုကနေချေးငွေမယူချင်ဘူးလားမရဘူး။
စီးပွားရေး ၀ ယ်ယူမှုများအားလုံးအပေါ် ၉၅% ငွေပြန်အမ်းပါ
“ Cash Back Business Credit Card” ကို သုံး၍ သင်ဝယ်ယူသောပစ္စည်းတိုင်းအတွက် 95% ငွေပြန်အမ်းနိုင်ပါသည်။
'Cash Back Business Credit Card' သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်မကြာခဏ ၀ ယ်ခြင်းများနှင့်နေရာတိုင်းတွင်နေရာတိုင်း၌အကန့်အသတ်မရှိသို့မဟုတ်အမျိုးအစားကန့်သတ်ချက်မရှိသောသင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကန့်အသတ်မဲ့ ၉၅% ၀ င်ငွေရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ၀ ယ်လျှင်သင် $ 100,000 ၏ ၉၅% ကိုပြန်ရလိမ့်မည်၊ ၎င်းမှာဒေါ်လာ ၉၅၀၀၀ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀,၀၀၀ ၀ ယ်ပါက $ 95M ဒေါ်လာ၏ ၉၅% ကိုသင်ပြန်ရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပါကဒေါ်လာ ၁၀၀ မီလီယံ၏ ၉၅% ကိုပြန်လည်ရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းမှာ $ 100,000M ဖြစ်သည်။
သင်၏လစဉ်အသုံးစရိတ်သည်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း၊ ၁၀၀ မီလီယံ၊ ၁၀ ဒေါ်လာဘီလီယံရှိမရှိဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။
သင်သည်“ Cash Back Business Credit Card” ကို အသုံးပြု၍ သင်ဝယ်ယူသောသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုင်းအတွက် ၉၅% ငွေပြန်အမ်းရန်သင့်အား 100% အာမခံထားသည် WTE.
၂၄ နာရီအတွင်းဒေါ်လာ ၁၀ သန်းမှဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလျံဖြင့်အတိုးနှုန်းသက်သာသည့်ချေးငွေကိုရယူပါ။
အတိုးနှုန်းမရှိပါ။ အပေါင်ပစ္စည်းမ ချေးငွေမလိုပါ အကြွေးစစ်ဆေးစရာမလိုပါဘူး ကြွေးမြီဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမရှိ ငွေပြန်အမ်းခြင်းမရှိ!
စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေများအတွက်အတိုးမဲ့ချေးငွေအတွက် $ 10M မှ $ 50B ။
စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်အတိုးမဲ့ကုန်သွယ်မှုအကြွေးဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံအထိရှိသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံအထိအတိုးမဲ့ချေးငွေ။
ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူရန် $ 10M မှ $ 50B အတိုးမဲ့ချေးငွေ။
ကြော်ငြာအတွက် $ 10M မှ $ 50B အတိုးမဲ့ချေးငွေ။
ကုမ္ပဏီဝယ်ယူများအတွက် $ 10M မှ $ 50B အတိုးမဲ့ချေးငွေ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် $ 10M မှ $ 50B အတိုးမဲ့ချေးငွေ။
ပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူဘို့ $ 10M မှ $ 50B အတိုးမဲ့ချေးငွေ။
သင်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အတိုးမဲ့ငွေချေးမှုမှဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိရှိသည်။
WTE ၂၄ နာရီအတွင်းကုန်သွယ်မှုခရက်ဒစ်ကိုငွေသား (ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံ) သို့ပြောင်းလဲရန်ကူညီလိမ့်မည်။
တိုက်ပွဲများတွင် $ 10M မှ $ 50B လုပ်ပါ။
၁၁။ ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံရှိသောပစ္စည်းများကိုငွေမချပါနှင့်။
၁၂။ ဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုငွေမချပါနှင့်။
၁၃။ ဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံမှ ၅၀ ဘီလျံအထိရှိသောအိမ်ခြံမြေများကိုငွေမချွေတာပါ။
14. $ 10M မှ $ 50B တန်ဖိုးရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၉၀% ငွေသားလျှော့စျေးဖြင့်ရယူပါ။
၁၅။ ဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံမှ ၅၀ ဘီလျံအထိထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကိုငွေမချွေပါနှင့်။
ရောင်းအားမှဝင်ငွေ IN $ 10M မှ $ 50B အထွေထွေ။
၁၇။ လစဉ်အရောင်းဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံအထိထုတ်ယူပါ။
၁၈။ ရက်ပေါင်း ၉၀ (၁၀ ဒေါ်လာမှဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလျံ) အတွင်း ၁၀၀၀% ROI လုပ်ပါ။
ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုအသစ် (တန်ဖိုးဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံ) ကိုဖန်တီးရန်သင့်စီးပွားရေးကိုကြီးပွားတိုးပွားပါ။
၂၀။ ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၂ လတာ ၀ င်ငွေရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိပါ (တန်ဖိုး ၁၀ ဒေါ်လာမှ ၅၀ ဘီလျံဒေါ်လာ) ။
၂၁။ သင်၏ဝင်ငွေကိုရက် ၃၀ အတွင်း ၁၀၀x ဖြင့်မြှောက်ပါ။
၂၂။ ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း ၀ င်ငွေ ၁၀,၀၀၀% တိုးမြှင့်ပါ။
၂၃။ ရုန်းကန်နေရသောကုမ္ပဏီကိုလှည့်ပြီးရက် ၃၀ အတွင်းသင်၏ဝင်ငွေနှင့်အမြတ်ငွေကိုဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိတိုးမြှင့်ပါ။
အရောင်းနှင့်ဝယ်ယူမှုများတွင် $ 10M မှ $ 50B လုပ်ပါ။
24 ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို (ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိ) ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။
25 ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏လုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးလိုင်စင်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဒိုမိန်းအမည်များသို့မဟုတ်ဉာဏပစ္စည်း (တန်ဖိုး ၁၀ ဒေါ်လာမှဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံအထိ) ၀ ယ်မည်။
26 ။ WTE သင့်ကိုကြိုတင်ငွေမတောင်းဘဲကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
27 ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏ပိုလျှံစာရင်း၏ ၁၀ ဒေါ်လာမှဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံကိုလက်လီတန်ဖိုးအပြည့်ဖြင့် ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။
28 ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှု၏ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိ ၀ ယ်ယူရန်သင့်အား ၀ ယ်ယူသူများအားသင်ထံသို့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။
29 ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင့်ကုမ္ပဏီနှင့်စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသင့်အပြည့်အ ၀ တောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချရန်ကူညီလိမ့်မည်။
30 ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းသင်၏ပိုလျှံစာရင်းအားအပြည့်အ ၀ လက်လီရောင်းရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ 24% အာမခံချက်
ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် $ 10M မှ $ 50B ကာကွယ်ပါ။
31 ။ WTE သင်၏ချေးငွေများနှင့်ဘဏ္assetsာရေးဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများအားဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံအထိအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
32 ။ WTE ဆုံးရှုံးမှု၊ တန်ဖိုးကျဆင်းခြင်း၊ လိမ်လည်မှုနှင့်ကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအဖြစ်အပျက်များမှသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှဒေါ်လာ ၁၀ သန်းမှ ၅၀ ဘီလျံအထိအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။
33 ။ WTE သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလျှို့ဝှက်ထားစဉ် (ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိ) ငွေရေးကြေးရေးအရသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည်။
34 ။ WTE ကွဲပြားခြားနားသောဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပလက်ဖောင်းများကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။
35 ။ WTE သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ်ကိုဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်၊ တည်ဆောက်၊ တည်ဆောက်၊
36 ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းစျေးကွက်တန်ဖိုး ၃ ဆရှိသည့်တန်ဖိုးနည်းငွေသားများကိုဒေါ်လာ ၁၀ မီလျံမှ ၅၀ ဘီလီယံသို့ပြောင်းလဲရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
37 ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းအကောင့်များရရန်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိဝင်ငွေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီးငွေပေးချေမှုမခံရသည့်အန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
မည်သည့်အရာမဆိုသုံးစွဲရန်မလိုဘဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ဖြစ်လာပါစေ။
ပိုက်ဆံမရှိဘဲ $ 10M မှ $ 50B ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ!
လက်လီကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် $ 38M မှ $ 10B အစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ။
နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ။
ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ပါ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွင်ရှယ်ယာများကိုဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလီယံအထိဝယ်ယူပါ။
မီဒီယာကုမ္ပဏီတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ။
သံမဏိကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ။
အိမ်ခြံမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် $ 45M မှ $ 10B အစုရှယ်ယာများကိုရယူပါ။
46. ​​ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် $ 10M မှ $ 50B အစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ။
47. လေကြောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် $ 10M မှ $ 50B အစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ။
48. ရေနံ ၀ န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဒေါ်လာ ၁၀ မီလီယံမှ ၅၀ ဘီလျံရှိသောအစုရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူပါ။
49 ။ WTE သင်ပေးဆပ်ရန်ရှိနေသည့်ကြွေးမြီဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံအထိပေးဆပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
50 ။ WTE သင်၏အကြီးမားဆုံးပြproblemsနာများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကို ၂၄ နာရီအတွင်းဖြေရှင်းပေးမည်။
51 ။ WTE ၂၄ နာရီအတွင်းစာအုပ်အပြည့်အ ၀ ဖြင့်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်မပြည့် ၀ ခြင်းနှင့်စိတ်သောကရောက်နေသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဒေါ်လာ ၅၀ ဘီလီယံအထိပြန်လည်ရယူရန်ကူညီလိမ့်မည်။
52 ။ WTE ရက် ၃၀ အတွင်းသင့်လုပ်ငန်း၏ကုန်ကျစရိတ်များကို ၉၀% လျှော့ချရန်ကူညီလိမ့်မည်။
53 ။ WTE သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ငွေပေးချေမှုအန္တရာယ်များကိုဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
54 ။ WTE ပိတ်ဆို့ထားသည့်ရန်ပုံငွေများကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ရာတွင်ကူညီလိမ့်မည်။
55 ။ WTE သင်ကမကောင်းတဲ့ကြွေးမြီအခြေအနေများသန့်ရှင်းရေးကူညီလိမ့်မည်
56 ။ WTE သင်စျေးနှုန်းနှင့်လဲလှယ်ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွှားကူညီပေးပါမည်။
58 ။ WTE အသစ်သို့မဟုတ်ခက်ခဲသောစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်သင်ကူညီလိမ့်မည်